Politics of power vs the Question of Rights: Reflection on ODF and the fate of Oromia
April 5, 2013	Comments Off on Politics of power vs the Question of Rights: Reflection on ODF and the fate of Oromia
Politics of power vs the Question of Rights: Reflection on ODF and the fate of Oromia What does this mean politically? Why ODF and Can …
April 3, 2013	Comments Off on Manni hidhaa tokko yoo diigame malee deebi’anii keessatti hidhamuun hin hafu
April 3, 2013	Comments Off on Xalayaa Oromummaa: Qabsaa’ota Oromoo maraaf
Abdii Boruutiin Duraan dursee, nagaan Obbolummaa, Oromummaa fi Sabboonummaa bakka jirtan maratti isin haa gayu. Uummatni keenya uummatni Oromoo erga …
April 3, 2013	Comments Off on Walhubannoon ABO QC fi ABO Shanee Gumii tokkummaa dhugaatti jijjiiramuu baatnan..
Abdii Boruu tiin Haala mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo bar-kurnee lamaan dabranii of duuba garagallee yoo ilaalle, erga Addi Bilisummaa Oromoo (ABOn) …
April 3, 2013	Comments Off on Tokkummaa tokkummaa yoo jennu, hiika fi kaayyoo isaa hubannaa?
Abdii Boruutiin Tokkummaa tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa,…jedhanii artistoonni keenya yoo weellisan;Tokkummaan humna! jedhamee yoo dhaadatamu; tokummaan barbaachisaa qofaa otuu hin taane murteessaa dhas jedhamee yoo …
Kan dabrerraa haa barannu!!
April 3, 2013	Comments Off on Kan dabrerraa haa barannu!!
Abdii Boruutiin Waan ta’e fi dalagamee dabre ofduuba garagalanii ilaaluu fi hubachuudhaan, kan dabrerraa barachuun, waan gara fuulduraatti hojjetamuutiif murteessaa ta’a. …
April 3, 2013	Comments Off on Dhimmi siyaasaa Oromoo bara baraan tarkaanfii tokko gara fuulduraatti..
Abdii Boruutiin Mata duree kanaan barruu kana akkan dhiyeessu kan na taasise, barreeffama dhiyoo kana mata duree“የኦሮሞ ፖለቲካ ጉዳይ” Ya Oromo politiikaa guddaay – Dhimma siyaasaa Oromoo” jedhuun …
April 3, 2013	Comments Off on Qabsoon bilisummaa Oromoo garamitti deemaa jira?
Abdii Boruutiin Dubbistootni barruu kanaa waayee kana hin beekan yookaanis isaaniif kun haaraa dha jedhee otuu hin taane, barreeffama kanaaf seensa akka ta’an, mee …